Akụkọ - you ghọtara ọgwụgwọ ọgwụgwọ Ultrasonic?
You ghọtara ọgwụgwọ ọgwụgwọ Ultrasonic?
Understand na-aghọta ihe Ọgwụgwọ Mmetụta Ultrasonic ?
High Frequency Mechanical Impact (HFMI), nke a makwaara dị ka Ultrasonic Impact Treatment (UIT), bụ ọgwụgwọ dị elu nke na-arụ ọrụ nke ọma iji meziwanye ike ọgwụgwụ nke usoro welded.Na ọtụtụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe usoro a makwaara dị ka ultrasonic peening (UP ).
Ọ bụ ọgwụgwọ igwe na-atụ oyi na-agụnye ịpị ụkwụ mkpịsị ụkwụ ya na agịga iji mepụta okirikiri nke redio ya na iwebata nrụgide nrụgide fọdụrụnụ.
Na mkpokọta, enwere ike iji usoro UP dị elu maka ọgwụgwọ nke ụkwụ ụkwụ ma ọ bụ welds na mpaghara dị elu karịa ma ọ dị mkpa.
Kpamkpam ibughari eti
Ngwaọrụ UP dabere na ihe amara site na 40 nke narị afọ gara aga teknụzụ nke iji isi na-arụ ọrụ yana ndị na-agagharị agagharị maka ịkụcha hama. N'oge ahụ na mgbe e mesịrị, ọtụtụ ngwaọrụ dị iche iche dabere na iji ihe ndị nwere ike ibugharị wepụtara maka ọgwụgwọ mmetụta nke ihe na welded ọcha site na iji akụrụngwa pneumatic na ultrasonic. A na-enye ọgwụgwọ dị irè karị mgbe ndị na-eme ihe na-ejikọtaghị ọnụ nke onye na-eme ihe ahụ mana ha nwere ike ịgagharị n'etiti onye na-eme ihe na ihe a na-emeso. E gosipụtara ngwaọrụ maka ọgwụgwọ ọgwụgwọ nke ihe na ihe ndị na-adọrọ adọrọ na ndị na-ebugharị ebugharị na-ejide na njide. N'ihe banyere a na-akpọ etiti mmewere-striker (s) ike nke naanị 30 - 50 N chọrọ maka ọgwụgwọ nke ihe.
Nlere anya nke oma site na ngwa oru ya na ndi n’ebughari aghari imeghari maka imetuta ihe n’elu.
Ọ na-egosi a ọkọlọtọ set nke mfe replaceable arụ ọrụ isi na kpamkpam ibughari eti maka dị iche iche ngwa nke UP.
A set nke na-agbanwe agbanwe na-arụ ọrụ isi maka UP
N'oge ọgwụgwọ ultrasonic, onye na-egbu ihe oscillates na obere ọdịiche dị n'etiti njedebe nke transducer ultrasonic na ụdị ọgwụgwọ ahụ, na-emetụta ebe a na-emeso ya. Kinddị mmegharị / mmetụta dị elu dị elu yana mkpụmkpụ oscillations dị elu na-emetụta ihe a na-emeso ya bụ nke akpọrọ mmetụta ultrasonic.
Nkà na ụzụ na akụrụngwa maka Ultrasonic Peening
Na ultrasonic transducer oscillates na akwa ugboro, na 20-30 kHz ịbụ ahụkarị. Na transducer ultrasonic nwere ike ịdabere na piezoelectric ma ọ bụ teknụzụ magnetostrictive. Ihe ọ bụla eji teknụzụ eme ihe, njedebe nke transducer ga-oscillate, nke a na-enwekarị njupụta nke 20 - 40 mm. N'oge oscillations, ihe ntụgharị transducer ga-emetụta onye na-eti ihe (s) na ọkwa dị iche iche na usoro oscillation. Ndị na-eti ihe ga-enwekwa mmetụta dị ka ebe a na-emeso ya. Mmetụta na-arụpụta na nrụrụ plastik nke oyi akwa nke ihe ahụ. Mmetụta ndị a, kwughachiri ọtụtụ narị puku ugboro ugboro kwa sekọnd, yana oscillation dị elu nke na-ebute na ngwongwo a na-emeso na-eweta ọtụtụ uru bara uru nke UP.
UP bụ ụzọ dị mma maka ịkwụsị nrụgide nrụgide na-emerụ ahụ na iwebata nrụgide bara uru nke nrụgide dị na mpaghara nke akụkụ na ihe ndị a na-agbanye ọkụ.
Na mmụba ike ọgwụgwụ, a na-enweta mmetụta bara uru site na iwebata nrụgide nrụgide nrụgide n'ime akwa nke ọla na alloys, belata mgbatị nrụgide na mpaghara mkpịsị ụkwụ weld na mmelite nke ihe eji arụ ọrụ nke ihe dị elu.
Industrial Ngwa nke UP
Na UP nwere ike n'ụzọ dị irè etinyere ike ọgwụgwụ ndụ mma n'oge n'ichepụta, ghara ịgbanwe na mmezi nke welded ọcha na owuwu. Ejiri teknụzụ UP na teknụzụ rụọ ọrụ nke ọma na ọrụ mmepụta ihe dị iche iche maka nrụzigharị na nrụzi weld nke akụkụ na ihe ndị mejupụtara. Mpaghara / ulo oru ebe etinyere UP di nke oma gụnyere: Railway na Highway Bridges, Akụrụngwa Ewuwu, Shipbuilding, Mining, Automotive and Aerospace.
Post oge: Nov-04-2020